Etu aga-esi kwuo okwu na okwu Twitter Hashtags | Akụkọ akụrụngwa
O nwere ike ịbụ na ị bụ onye ọrụ na-arụ ọrụ nke netwọk mmekọrịta a maara nke ọma na Twitter na n'ọtụtụ oge ị na-ewe iwe ozugbo site na ụfọdụ omume ndị "dịrị ndụ" na usoro iheomume gị. Na Twitter, oge ụfọdụ ihe niile bara uru na nke a nwere ike ịkpasu gị iwe n'ụzọ ụfọdụ, yabụ taa anyị ga-ahụ ihe ị ga - eji zere ịgụ ihe ị na - achọghị ịgụ, ọ bụ ya mere anyị ga - eji hụ esi ogbi okwu a kapịrị ọnụ na Twitter hashtags na ụzọ dị mfe na site na ngwaọrụ ọ bụla.
Ihe mbụ anyị ga-edo anya bụ na tweets, okwu ma ọ bụ ndị ọrụ anyị gbachiri nkịtị enwere ike dezie ha oge ọ bụla n’ọdịnihu ka anyị nwee ike ịnata ma ọ bụ gụọ ha ọzọ, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na mgbe anyị na-amachi ụdị ọdịnaya a ma ọ bụ ndị mmadụ na ọ ga-adị ruo mgbe ebighi ebi, yabụ ọ bụ na ụdị ọdịnaya a abụghị nke a kpochiri ọzọ na anyị chọrọ n'ezie izere. Nhọrọ nke ogbi ga-eme ka ewepụ Tweets ndị a na taabụ ọkwa gị, zipu ọkwa, SMS, ozi ịntanetị, bido usoro iheomume na nzaghachi tweet.
1 Esi ogbi okwu na hashtags na iOS
2 Etu esi ogbi okwu na hashtags na ngwaọrụ gam akporo
3 Etu esi ogbi okwu na hashtags na PC
4 Ogbi na mobile.twitter.com
5 Etu esi dezie ma ọ bụ kpughee okwu ma ọ bụ hashtags
Esi ogbi okwu na hashtags na iOS
Imechi okwu anyị achọghị ịgụ na hashtags n'ime ihe iOS ngwaọrụ anyị ga-agbaso usoro ndị a. Ihe mbụ bụ iji nweta taabụ nke nkwuputa ma pịa na akara ngosi gia (gia) gosipụtara na ihuenyo. Mgbe ahụ, anyị na-agbaso usoro ndị a:
Pịa Mwepụ, wee pịa Okwu mebiri emebi
Pịa na Tinye nhọrọ ma dee okwu ma ọ bụ hashtag ịchọrọ ịgbachi nkịtị
Họrọ ma ị chọrọ inwe ike nhọrọ ke mmalite usoro iheomume, na ificationsma Ọkwa, ma ọ bụ ha abụọ
Họrọ nhọrọ Site na onye ọrụ ọ bụla ma ọ bụ Naanị n'aka ndị m na-esoghị (naanị maka ọkwa enyere)
Mgbe ahụ, anyị ga-agbakwunye oge. Anyị pịa nhọrọ Ogologo oge ole? na anyị na-ahọrọ n'etiti Ruo Mgbe Ebighị Ebi, 24 awa, 7 ụbọchị ma ọ bụ 30 ụbọchị
Mgbe ahụ, anyị pịa Chekwa. Ga-ahụ oge ogbi na-esote okwu ọ bụla ma ọ bụ hashtag abanye
Ozugbo anyị mechara usoro a, anyị ga-pịa nhọrọ Njikere ịpụ ma anyị enweela hashtags na Keywords ọnụ maka oge anyị họọrọ.
Etu esi ogbi okwu na hashtags na ngwaọrụ gam akporo
The usoro yiri na gam akporo ngwa ma o doro anya na ụfọdụ nzọụkwụ ịgbanwe na-akwanyere ndị iOS version. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji hụ usoro site na nkwụsị site na iji zere nsogbu na nke a amalitekwara na tabma Ọkwa tab ma n'ime cogwheel.
Anyị na-agakwa na nhọrọ nke emechibidoro ọnụ wee pịa akara ngosi
Anyị na-ede okwu ahụ ma ọ bụ hashtag na anyị chọrọ ịgbachi nkịtị na-enye anyị ohere itinye ihe niile n'otu oge ma ọ bụ n'otu n'otu
Anyị na-ahọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwado nhọrọ na usoro iheomume Malite, na ificationsma Ọkwa ma ọ bụ na ha abụọ
Mgbe ahụ, anyị pịa Onye ọ bụla ma ọ bụ Site na ndị ị na-esoghị (ọ bụrụ naanị na ị gbanye nhọrọ ahụ na ọkwa, pịa ificationsma Ọkwa iji mee mgbanwe)
Ugbu a, anyị ga-ahọrọ oge anyị nwekwara ike ịhọrọ n'etiti: Ruo mgbe ebighi ebi, awa 24 site ugbu a, ụbọchị asaa site ugbu a ma ọ bụ ụbọchị 7 site ugbu a.
Pịa na Save ị ga-ahụ akara ngosi dara ụda yana oge nke ịgbachi nkịtị na-esote okwu ọ bụla ma ọ bụ hashtag
Etu esi ogbi okwu na hashtags na PC
Ọ bụrụ na ị jiri ngwa PC, ị nwekwara ike mechie nkwupụta nke ụdị tweet ma ọ bụ hashtags nke na-ewute gị nke ukwuu na usoro a yiri nke anyị na-eme na ngwaọrụ iOS na gam akporo, mana yana obere mgbanwe na mmebi. Gịnị na-agbanwe tumadi bụ na anyị nwere nweta ntọala nke Ntọala na nzuzo na menu ndọpụta site na foto profaịlụ anyị. Site n'ebe ahụ usoro ndị ahụ yiri mgbe anyị pịa Gbachi nkịtị okwu wee tinye.
Anyị nwere ike ịhọrọ mmalite usoro iheomume nhọrọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbachi nkịtị okwu ma ọ bụ nkebi ahịrịokwu na gị Malite usoro iheomume ma ọ bụ na .Ma ọkwa ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ imechi okwu ma ọ bụ ahịrịokwu ahụ na ificationsma Ọkwa gị. N'ebe a, anyị nwere ike ịhọrọ nhọrọ Site na onye ọrụ ọ bụla o Naanị site na ndị m na-esoghị na mgbe ahụ, dịka ọ dị n’oge gara aga, anyị nwere ike ịhọrọ oge anyị chọrọ ịgbachi nkịtị a.
Anyị tinye okwu na akụkụ aka nri ma dị njikere na igbe maka ya ma anyị họrọ nhọrọ ndị dịnụ:
Ogbi na mobile.twitter.com
Nhọrọ ọzọ anyị nwere ike iji mee nchọgharị na netwọkụ mmekọrịta a bụ mobile.twitter.com, n'ihi nke a, anyị ga-ahụkwa usoro a ga-emerịrị iji mechie ihe anyị achọghị ịgụ. Anyị na-amalite dị ka ndị fọdụrụ nke nhọrọ na thema Ọkwa tab ma anyị na-eso gara aga nzọụkwụ dị ka ma ọ bụrụ na ọ bụ a PC, ọ dị mfe na-adịghị egosi anyị nsogbu ọ bụla. Anyị na-pịa na gia na mgbe ahụ Silenced Words, n'ebe ahụ anyị ga-agbaso usoro dịka na usoro ndị ọzọ, na-agbakwunye okwu ahụ, hashtag ma ọ bụ ahịrịokwu anyị chọrọ ịgbachi nkịtị.
.Fọdụ Kọwapụta isi na usoro a nke imechi ọnụ okwu na hashtags. Olu ogbi adighi akpachabara anya. N’aka nke ọzọ, enwere ike itinye ha na akara edemede ọ bụla mana akara anyị n’etinye na ngwụcha nke okwu ma ọ bụ nkebiokwu ahụ adịghị mkpa.
Mgbe ị dara ogbi, okwu n’onwe ya na hashtag ya ga-adachi. Ọmụmaatụ: Ọ bụrụ n ’imechi okwu“ unicorn ”, okwu a bụ" unicorn "na hashtag" #unicorn "ga-eme ka ogbi mara na ọkwa gị.
Iji ogbi nkwupụta maka Tweets, bido usoro iheomume Tweets, ma ọ bụ na-aza Tweets na-ekwu otu akaụntụ, ị ga-etinyerịrị akara "@" tupu aha ahụ. Nke a ga-emechi ọkwa maka Tweets na-ekwu akaụntụ ahụ, mana ọ gaghị emechi akaụntụ ahụ n'onwe ya.
Okwu, nkebi ahịrịokwu, aha njirimara, emojis, na hashtags ndị gafere oke agwa kachasị nwere ike mechie.
Nhọrọ nke ogbi dị na asụsụ niile akwadoro na Twitter.
A ga-ewepụta oge ogbi na oge a kara aka, nke bụ Ruo mgbe ebighi ebi. Ihe ndị a bụ ntuziaka ka ịtọọ oge maka nhọrọ ogbi na ngwaọrụ ndị akwadoro.
Iji hụ ndepụta nke okwu gị dara ụda (ma wepụ ha), gaa na ntọala gị.
Nkwado anyị na-ezitere gị site na email ma ọ bụ site na Twitter anaghị atụ aro ọdịnaya nke gụnyere okwu gị na hashtags gị.
Etu esi dezie ma ọ bụ kpughee okwu ma ọ bụ hashtags
Mgbe anyị chọrọ ịkwụsị imechi okwu ma ọ bụ dezie hashtag ka ọ pụta na usoro iheomume anyị, anyị ga-edozi usoro ahụ site na ịnweta taabụ Ma Ọkwa, n'ime gia na ịnweta ndepụta nke imechi ọnụ okwu. N'oge ahụ anyị pịa okwu ma ọ bụ hashtag anyị chọrọ dezie ma ọ bụ kwụsị ịgbachi ma gbanwee nhọrọ ndị ga-egosi.
Ọ bụrụ n'ikpebie ịkwụsị ịkwụsị okwu ma ọ bụ hashtag, anyị ga-pịa Hichapụ okwu wee gosi ya na nhọrọ Ee, ejiri m n'aka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Etu esi ewepu okwu na nkpuru okwu na Twitter